ပြီးပြည့်စုံသော Portrait ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ ?? ထိရောက်သောအကြံပြုချက်များနှင့်ဥပမာများ - ONE DAILY MEDIA
Portrait ပုံတစ်ပုံ၏ ခိုင်မာမှု အနည်းအများဟာ ဓာတ်ပုံဆရာ၏ ဇာတ်ကောင်နှင့် အမြင်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ Portrait ကောင်းတစ်ခုရိုက်ကူးခြင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ အတွက်ပင်လျှင် လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ။ အလင်းရောင် ချိန်ဆခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို ကျွမ်းကျင်နိုင်သော်လည်း Portrait ပုံများတွင် အရေးကြီးဆုံးမှာ အတွင်းဇာတ်ကောင်၏ အနှစ်သာရနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းယူနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ မေးရင် တထါတရံမှာ မရည်ရွယ်ပဲ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်သွားတာမျိုးပါ။
Street နှင့် Travel Photography နှစ်ခုစလုံးအတွက် အနှစ်သာရကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်သစ်များအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီး ဆက်တိုက်ဆိုသလို အံ့အားသင့်စရာများအဖြစ် တိုးတက်လာရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ လမ်းဘေး ဒါမှမဟုတ် ခရီးသွားကဏ္ဍ မဟုတ်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သဘာဝအကျဆုံး ပုံတစ်ပုံကို အောင်မြင်စွာ ရိုက်ကူးခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရှုထောင့်အချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ပုံသေနည်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် နှင့် အခြားအရာများဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန် သောရိုက်ချက်များမှ Portrait ပုံများဟာ အစဉ်အမြဲဆိုသလိုသင့်ကို အံ့အားသင့်စေနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Siddharthan Raman
မှန်ကန်သောဇာတ်ကောင် သို့မဟုတ် အသင့်တော်ဆုံးအကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်ခြင်းက သင့်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရိုက်ကူးသည့်အရာက သင့်ဓာတ်ပုံကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး တောက်ပသောအလင်းရောင်ရှိနိုင်သော်လည်း ဓာတ်ပုံ၏တစ်ခုလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာအပေါ် သာ အလင်းကျရောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးအနေဖြင့် ထိုထူးခြားသောမျက်နှာ သို့မဟုတ် မမြင်ဖူးသော ဇာတ်ကောင်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အနီးကပ်ကြည့်ရှူလေ့လာရပါမယ်။
သူတောင်းစား ဒါမှမဟုတ် ဝေဒနာခံစားနေရသူ လူတစ်ယောက်ကို ရိုက်ရတာက ဓာတ်ပုံဆရာတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်း လွယ်ကူပေမယ့် ဒါက ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါဘူး။ ဒီလို အံ့သြစရာကောင်းပြီး သိသာထင်ရှားတဲ့ မျက်နှာမျိုးက ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ အမှတ်ရစရာတွေအဖြစ် မျက်နှာကို မှတ်မိပြီး အရေးကြီးသော ဇာတ်ကောင်အစစ်အမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Devansh Jhaveri
ဓာတ်ပုံ – Arun Titan
ဓာတ်ပုံ – Anthony Pappone
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အမြင်ဆိုတာ ဘာရိုက်ရမယ်ဆိုတာ သိခြင်းပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ် ဇာတ်ကောင်ကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် အဲဒီလူရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ဖို့က ဒုတိယ အတွေးမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါက ငါရိုက်ကူးချင်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အရာပဲလို့ စိတ်ချယုံကြည်မိတဲ့ ထိုးထွငိးသိမြင်မှုမျိုး အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ တွေးခေါ်မှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိရန် သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်သက်မှု ၊ နောင်တရမှုများဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင် ထုတ်နုတ်ထားသော သီအိုရီတစ်ခုနှင့် သင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူကြိုးစားမှုများ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Portrait ပုံ ဇာတ်ကောင်အတွက် လုံးဝမသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ဆီကင်မရာကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်မလဲဆိုတာ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ပါ။
ဓာတ်ပုံ – Mitchell Kanashkevich
ဓာတ်ပုံ – Marji Lang
ဓာတ်ပုံ – James Hervey
သင့်ပုံအတွက် တိကျပြည့်စုံ‌သော မျက်နှာတစ်ခုပါသည့် ပဇာတ်ကောင်ကို သင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေမည် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုစိတ် ခံစားချက် မဆုံးရှုံးစေဘဲ ရိုက်ကူးရန် သင်စတင်ရမည့် ကနဦးခြေလှမ်းများကား အဘယ်နည်း ?? ရိုးသားစွာ ယုံကြည်မှုနှင့် အပြုအမူများ လိုအပ်သည့်အတွက် ဤအပိုင်းသည် ဓာတ်ပုံဆရာတိုင်းအတွက် ခက်ခဲလှပါတယ် ။ ခြေလှမ်းတစ်ချက်မှားသည်နှင့်ဇာတ်ကောင်၏ အရသာကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သင်ရိုက်ကူးလိုသော သူ၏စိတ်ခံစားချက်များ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နွေးနွေးထွေးထွေး ပြုံးပြပြီး နူးညံ့သော လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် သိမ်မွေ့သော ကင်မရာ လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် သူတို့ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် မြွေဆရာတစ်ဦးက မြွေနှင့်၎င်းကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် နူးညံ့ ရဲရင့်စွာ ပြုမူသကဲ့သို ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပျက်ပြီး ထိုကဲ့သို့ မကြာခဏ တည်ငြိမ်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါက သင်ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံ – Brigidabrito
ဓာတ်ပုံ – Christophe Stramba-Badiali
မှန်ကန်သောမျက်နှာအမူအရာ၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ကြည်နူးဖွယ်အပြုံး၊ ဝမ်းနည်းသောမျက်နှာ များက ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တရများအတွင်း၌ ထာဝရတည်ရှိနေစေမည့် ပုံရိပ်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေပါတယ် ။ ထိုထူးခြားဆန်းကြယ်သော Portrait ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူးရန်မှာ လှုပ်ရှားမှုအနေအထားကို ရိုက်ကူးခြင်းထက် တည်ရှိနေသည့် အခြေအနေကို ဖမ်းယူရန်ဖြစ်ပါတယ် ။
ဤအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခြင်းသဘောနှင့် ၎င်းတို့၏မျက်လုံးများမှတစ်ဆင့် မြင်နိုင်သော စိတ်ခံစားမှုများ၏ အနှစ်သာရများက သင့်လက်ရာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က ထိုဇာတ်ကောင်ကို ပထမဆုံးလေးစားတန်ဖိုးထားသူဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူတိုင်းက လည်း တန်ဖိုးထားကာ အသိအမှတ်ပြုကြခြင်းက တူညီသောခံစားချက်များကို ဖော်ပြနေပါတယ် ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြင့် ထူးထူးခြားခြား ကြီးမားသော စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် ဤအရာကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်လည်း ချစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံ – Mio Cade
ဓာတ်ပုံ – Devon Cummings
ဓာတ်ပုံ – Eric Lafforgue
(5) လေ့ကျင့်မှုနှင့် စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း
လေ့ကျင့်မှုနှင့် စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ဟာ ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး စကားလုံးနှစ်လုံးဖြစ်ပြီး Portrait ပုံများအတူ ၎င်းသည်လည်း ပို၍ပင်အ‌ရေးကြီးလာပါတယ်။ တသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းနှင့် မီးတောက်ပမာ ‌အပြင်းအထန် စိတ်အားတက်ကြွခြင်းက သင့်အလုပ်အပေါ် ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း ကဏ္ဍတိုင်းတွင် သင့်ကိုယ်သင် အံ့အားသင့်ဖွယ် ဖြစ်နေပါစေ။ မည်သည့်အနုပညာမဆို အပေးအယူလုပ်သည့် စကားလုံးများကို ဘယ်တော့မှ နားမထောင်ပါနှင့်။
ခရီးသွားခြင်းနှင့် စူးစမ်းလေ့လာခြင်းသည် သင့်အား အံ့သြဖွယ်ရာများ၊ များပြားလှသော ပုံရိပ်မျက်နှာများ၊ အံ့သြဖွယ်အပြုံးများနှင့် မရေမတွက်နိုင်သောပုံပြင် ဇာတ်လမ်းများစွာကို သင့်အား ပြသပါလိမ့်မယ် ။ သင်၏ ကောင်းမွန်လှပသော ဓာတ်ပုံများ ၊ သင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်များကို comment တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Alireza202
ဓာတ်ပုံ -Joey L